Home Wararka Gudaha DEG DEG:- Daawo:- Muqaal Xasaasi ah! Hooyadii dhashay Ikraan oo u jawaabtay...
DEG DEG:- Daawo:- Muqaal Xasaasi ah! Hooyadii dhashay Ikraan oo u jawaabtay Fahad Yaasiin, fariina u dirtay Xasan Sheekh
Hooyadii dhashay gabadhii la waayey ee Ikraan Tahliil oo maanta hadal heynta kiiskeedu uu cirka isku shareeray ayaa ka jawaabtay eedeyntii uu Fahad Yaasiin maanta u jeediyey R/Wasaare Rooble, Mahad Salaad iyo Cabdiraxmaan Al-Cadaala.
Previous articleBarcelona Oo Ka Hadlay Mustaqbalka Gavi, Maxaa Cusub?
Next articleGudoomiye cusub oo loo magacaabay degmada Afgooye
Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya & hoggaamiyaha militeriga Suudaan oo ka wada hadlay...